Sirta lama filaanka ah ee ku qarsoon qosolka | Saxil News Network
Image captionQosolka waa mid aan mar walba xaddidneyn
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qosol loogu jawaabay markii uu bishii Sitembar ee sannadkii 2018-kii golaha Qaramada Midoobay u sheegay inuu qabtay wax ka badan howlihii ay qabteen “Ku dhawaad maamul kasta” oo soo maray taariikhda dalkiisa.
Mr Trump ayaa markii dambe qirtay in uusan “filaneynin” falcelintaas – laakiin wuxuu sheegay in uusan “wax dhib ah u arkin”.
Qosolku waa mid ka mid ah waxyaabaha dabiiciga ah ee ay bani’aadanka inta ugu badan ka sameeyaan.
Image captionSeynis yahannada ayaa sheegay in Daanyeerrada noocan ah ay sidoo kale qoslaan
Haddiiba uu jiirka dabeecaddaas leeyahay, wax lala yaabo ma aha in bani’aadanku ay lacag ku bixiyaan iney qoslaan.
Xitaa carruurta indhooleyaasha ah iyo kuwa dhagaha la’ wey qosli karaan markii la kilkileeyo.
Faa’iidooyinka uu qosolka leeyahay waxaa ka mid ah inaan u adeegsan karno xakameynta xaaladaha adag ee na soo mara.
Image captionShirka jaraa’id waxaa si wada jir ah u qabtay madaxweyneyaashii Mareykanka iyo Ruushka
Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Bill Clinton ayaa si weyn loogu xasuustaa in hadda ka hor uu munaasabad shir jaraa’id ah, oo uu la yeeshay madaxweynihii hore ee Ruushka Boris Yeltsin, ka dhigay dhacdo la yaab leh oo soo jiidatay warbaahinta guud ahaan caalamka.
Hase ahaatee Mr Clinton ayaa markii dambe u muuqday inuu iska dhigayo qof aan si gaar ah ugu qosleynin madaxweynaha Ruushka